`Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> Minneapolis Caabi leh - City of Minneapolis
Qarnigan 21aad, waxa aanu wajahaynaa dhibaatooyin cul-culus oo wada xiriira, sida sinaan iyo cadaalad la’aan iyo hawada iyo deegaanka sii kululaanaya. Waxyaabo badan oo is daba jooga ahina degdeg ah ayey u dhacayaan – Ha noqdaan degdega akhbaarta u socdaasho ama is - bedelada dhanka farsamada ah, ama faafida cuduradda. Minneapolis dhibaatooyinkaa iyo xaqaa’iqaa jira waxa ay diyaar u tahay in ay u babac dhigto iyadoo dhisaysa caabi magaalo.
Waa maxay waxa la yiraa caabiga magaalada?
Caabigu magaaladdu waa mugga shakhsiyaadka, beelaha, hay’adaha dowliga ah, ganacsiyada iyo hababka magaaladda dhexdeeda ka jiraa ay ku badbaadi karaan, kula qabsan karaan is-bedelada ayna ku bulaali karaan, wax kastaaba ha noqdaan wixii dhibaato ah ee cayn kasta ah ee la soo darsa.
Waa maxay dhabtii macnaha tani? Waxa aan ka shaqeynaynaa in aan hubino in cid walba oo reer Minneapolis ahi ay hesho waxa ay u baahan tahay si ay u bulaasho kolka waqtigu fiican yahay ama uu xun yahay labadada – khaas ahaan khakhsiyaadka iyo beelaha laga yaabo in ay nuqul yihiin iyadoo sababtu ay tahay caafimaad-darro, dikhow ama cunsirinimo jirta awgood.
Maxay tahay waxa la yiraa xeelada caabigu?
Caabigu asal ahaan waxa uu ku saabsan yahay noqoshada bulsho awood leh oo bulaasha– bulsho diyaar u ah la jaan-qaadka samaanka la marayo iyo waliba is bedelada imaan doona. Waxaa jira waxyaabo ay jaa dowlada magaaladu horey uga shaqeyansay, laakiin xeelada caabigu ay caawin doonto in hawlahaa la sii hagaajiyo. Hanaanka xeeladuhu waxa uu caawin doonaa isku xiridyada la isku xirayo qaybo badan oo magaaladeena ah oo ah labadaba dowlada dhexdeeda ama bulshada oo dhan. Qaybta hawsha ee xeeladaha ku saabsani waxa ay marka hore ku bilaabmi si balaaran ka dibna waa la soo dhuu-dhuubi si loo cadeeyo loona dhaqan geliyo hawlaha bili kara tayada nolosha dadweynaha magaalada.
Minneapolis waxa ay bilowday qaabeynta xeeladaha caabiga ah xagaaggii sanadka 2017. Hanaanka xaaladuhuna waxa uu ku bilowday eegid balaaran oo lagu sameeyey dhibaatooyinka caabiga magaalada Minneapolis hor taagan iyo sidoo kale shaqada wacan ee dad badani ay jaa horey u qabanayeen si ay u dhisaan caabiga magaalada.
Sida aad arrintan ugu lug yeelan karto.
Hadii aad ka shaqeyso ama aad ku nooshahay Minneapolis, waxa aan doonaynaa in aan maqalno rayigaaga ku saabsan waxyaabaha ku walwal galiya ee ka jira magaaladda, sida la’aanta guryo jaban oo kiro ah, iyo argagaxyada, sida duufaanaha (tornado), waxa aad walaaca ugu badan ka qabto.
Minneapolis waxa ay qaabaynaysaa xeelad caabi iyadoo qayb ka ah xulafo magaalooyin caalami ah oo uu maal geliyo uuna gargaaro mashruuca la yiraa 100 Magaalo oo Caabi leh, mashruucaa oo uu horseedkeeda lahaa Ururka Sama-falka ah ee Rockefeller Foundation.